Izimbali nokuhleka, ukukhuphuka yonke indlela | UZhenji
—— Umncintiswano wokwakha izintaba wesithupha
Umncintiswano wezintaba wabasebenzi owenziwa njalo ngonyaka kaMongameli Kikkoman zhenji ukudla co., L. wabanjwa ngoMeyi 11,2019 entabeni ye-fenglong njengoba kuhlelwe. Cishe bangu-400 abasebenzi kanye namalungu omndeni wabo abamba iqhaza kulo mncintiswano waminyaka yonke.
Ukuqala ngokusemthethweni komdlalo ngo-8: 30, ukubamba iqhaza emiqhudelwaneni yokukhuphuka yabasebenzi kulo nyaka kanye nemenenja jikelele, isekela lemenenja jikelele, abaphathi bezinkampani, abasebenzi behhovisi lomnyango ngamunye, banemisebenzi ehlukene njengokuthengisa, abasebenzi bokukhiqiza, ukufaka abasebenzi Iqembu lobudlelwano bomyeni nenkosikazi, ubaba nendodana (lowesifazane), ifayela lendodakazi kanye nendodana (yendodana), nomndeni wabathathu, kungakhathalekile ubulili, iminyaka, wonke umuntu ubhekene nenjabulo, kanye nogqozi.
Ehlobo lokuqala, izihlahla ze-pagoda ezintabeni ze-fenglong ziyaqhakaza zigcwele, futhi indlela yamatshe evunguza ngaphansi komthunzi wezihlahla igcwele izihlahla. Lapho umoya uvunguza uvunguza, kuzoba nezimbali ezinhle eziwela phansi. Ukukhanya kwelanga, iphunga lezimbali, ukuculwa kwezinyoni namanzi amnandi konke kwenza abantu baphumule futhi bajabule.
Yiba nemvelo futhi ujabulele ukubuka okuhle.Uba nabantu obathandayo, ujabulele ukufudumala kothando; Ngokubambisana nabanye osebenza nabo, jabulela ukuqonda okungapheli kweqembu; Yiba nawe futhi uzizwe injabulo nentuthuko yomzimba nengqondo yakho Ngemuva kwalokho lo mncintiswano, kukhethwe abawinile abayi-15.
Ukuzihlanganisa nendalo, ezemidlalo ezinothando, ukuxhasa ezempilo nokuhlakulela umoya omuhle wethimba kuyinjongo eziphambili zemisebenzi yangaphandle ehlelwe yinkampani.Imisebenzi yokuqondisa, hhayi nje ukwakha nokwenze intando, kungenye yemisebenzi ethandwa kakhulu yabasebenzi. Lo mncintiswano walo nyaka uwukuthi ngaphezulu, ngakho-ke asibheke phambili emisebenzini engaphezulu ethokozisayo yangaphandle ngonyaka olandelayo.